Home Onye na-ahụ n'anya FOOTBALL Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma
LB na-egosi Full Story of a Football Manager onye amara aha ya na aha njirimara; 'Onye nkuzi'. Ihe omuma anyi anyi bu ihe omuma n'akwukwo nke oma na ihe omuma bu ihe ndi n'eme ihe omuma ihe site na nwata rue oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu. O doro anya na ọtụtụ ndị ka na-ele ya anya dị ka otu n'ime ndị isi kachasị mma n'ụwa n'ihi nhazi ya na ogologo oge ya na Emirates. Ugbu a, hapụ ihe ị na-echere.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Ndụ nwata.
Arsene Wenger; Ụmụaka Akụkọ
A mụrụ Arsène Wenger na Strasbourg, nke dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke 22nd nke ọnwa 1949 maka nna ya, Mr Alphonse Wenger, onye na-elekọta ndị na-elekọta egwuregwu na onye na-azụ ụgbọala na nne na-azụ ụgbọala, Louise Wenger, onye nwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Enweela mgbe ọ dị obere dị anya site na papa ya n'ihi ọrụ ya siri ike. Ọ bụ onye na-ahụ maka ndị na-amị amị football maka otu mpaghara dịpụrụ adịpụ n'ebe obibi. Dika nwatakiri a, uzo nke nna ya mere ka ya na ndi mmadu no. N'ịchọ ka ị nọrọ nso, Mr Alphonse Wenger kpebiri ịkwaga n'Eneene na mama Louise si Strasbourg (ebe a na-amụ Arsene) n'ebe ọrụ ya (Duttlenheim) bụ nke dị nanị 20km n'ebe dị nso na ókè Germany.
Enweela Arsene Wenger na Duttlenheim, obodo nke nwere mmadụ isii puku mmadụ. A na-akpọ Duttlenheim dị ka ọ dị n'oge ahụ maka inwe ọtụtụ nkịta, ịnyịnya. A makwa obodo ahụ maka ndị na-agba ọsọ amateur na-azụlite. A nabatara Arsene na football mgbe ọ dị afọ 5 site na nna ya bụ onye wepụtara oge iji kpọlite ​​ya na egwuregwu ahụ. Egwuru otu obodo nta ya na nna ya dị oké ọnụ ahịa dị ka onye nchịkwa ya pụtara ọtụtụ ihe maka ya. Na oge ahụ, a maara ọkwa egwuregwu football nke ndị na-amateur amị na Duttlenheim n'ihi na ha na-egwu egwuregwu kacha mma amateur na mba France. Ọbụna ọ bụ onye dị mkpa n'òtù nna ya, Wenger aghaghị ichere ruo ogologo oge tupu ọ gbanwee agbakwunyere ndị ịgba egwu ọkachamara. Nke a dabeere na arịrịọ nna ya nke o rubere isi na nkwanye ùgwù. O jiri oge 15 na-agba ọsọ na-egwu egwuregwu nnabata onye nna ya na papa ya dị ka onye na-achịkwa tupu otu ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa aha ya bụ AS Mutzig wepụtara ya.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Ọrụ ọkachamara ọkachamara.
Mgbe Arsene Wenger bidoro ịmalite ọrụ football ya na ọkwa 1954 (agadi 5), ọ bụghị ihe niile gbasara ego ahụ. Ọ bụ n'ezie banyere ịhụnanya maka egwuregwu ahụ. Mgbe ọ na-egwu bọl, o nwere ọrụ oge ọ ga-arụ dị ka onye na-ere sịga.
Arsene Wenger Ọrụ Nlekọta Ọrụ
Ụlọ ọrụ ọkachamara mbụ Wenger dị ka onye ọkpụkpọ bụ AS Mutzig na 1969. Nke a bịara mgbe nna ya hapụrụ ya na otu ọ na-achị. AS Mutzig dị ka mgbe ahụ nọ na nke atọ nke French football. Arsene Wenger na-egwuri egwu dị ka onye na-agbachitere ụlọ ọrụ. Ya na Max Hild, onye njikwa ụlọ ọrụ ahụ, nwere mmekọrịta pụrụ iche.
Ya mma football egwuregwu mere ya a nyefe na RC Strasbourg. Onye na-azụ ya bụ Hild mgbe ọ kwụsịrị ka ya na ya nọgide na-enwe ezigbo mmekọrịta. Ọ bụ Max Hild onye tọrọ onye tọrọ ntọala nke Wenger ịghọ onye na-elekọta football mgbe ọ lara ezumike nká oge ochie site na egwuregwu.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Mmetụta Mmetụta
Arsene Wenger so n'etiti ndị na-agba chaa chaa mara mma nke na-eme ka ndị otu na-akwalite nkewa 1 nke French football. O meriri egwuregwu mbụ ya (Ligue 1 title) na 1978, nke bụ 9 afọ mgbe ọ gụsịrị egwuregwu. Ọ na-ewe ya afọ 9 nke ihe mgbu tupu ya emezu nrọ ya iji nweta mmeri.
Echere ihe mgbu nke mmeri na afọ itoolu mbụ nke ọrụ ọrụ ya. Ọ bụ ezie na otu àgwà dị oke mkpa nke ya bụ ikike ya iji dozie ọnọdụ. Arsene Wenger nwere mmetụta dị ukwuu maka oge ọ bụla ọ furu n'oge egwu ya. Ọ na-etinyekarị onwe ya ọmịiko. Ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ nọ ọdụ n'oche football mgbe ọ nwụsịrị. Nke a na-abụkarị oge ọ na-egosipụta na ya mehiere na ọdịda na obiọma na nghọta. Mgbe nsogbu nke mmeri meriri, nrụgide ya na-ahapụ. Ọ ga-adị jụụ mgbe ọ bụla ọ ga-egwu.
Imeri ihe egwuregwu mbụ ya (Ligue 1 title) na 1978, mgbe afọ 9 nke football ọkachamara pụtara ya. Njikọ 1 nke French ya abụghị nanị ihe mezuru maka ya. ọ pụtara ihe mere ọ ga-eji mee njem ezumike nká site na football football. Arsene Wenger lara ezumike nká n'oge na-adịghị anya mgbe o merisịrị njikọ ahụ, mgbe ọ dị afọ 32.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Ọrụ nlekọta.
Arsene Wenger Ọrụ nlekọta nlekọta
Nanị afọ atọ mgbe ọ kwụsịrị ọrụ ọrụ ya, Wenger dị njikere maka ihe ịma aka ọhụrụ, naanị oge a dị ka onye nchịkwa aka. Ọ sonyeere Cannes Ligue 2 dịka onye nchịkwa inyeaka na 1983. O nyeere onyeisi onyeisi ndị isi Jean-Marc Guillou aka, bụ onye mesịrị bụrụ onye nchịkwa nke Cote d'Ivoire. Wenger, mgbe o jiri afọ ole na ole dị ka onye inyeaka mesịrị ghọọ onye nchịkwa nke Nancy-Lorraine na 1984. Oge ya ji ụgwọ na-enye ekele site na ndị nwere ọnụ ọgụgụ dịka Aldo Platini (nna Michel Platini) nke hụrụ ọhụụ na-ekiri ọmarịcha ọrụ nchebe ya n'oge ahụ mgbe ọ ka bụ onye na-egwu egwu. O mere enyi ya bụ Boro Primorac, onye bụbu Valenciennes onye nyere ya aka na nyocha ya na Nancy-Lorraine na 1984. Gị nke a mere nke ọma maka afọ abụọ mbụ. Otú ọ dị, Mgbe e mesịrị na, ọ dịghị mma maka onye French ahụ dị ka ụlọ ọrụ ọ na-elekọta. Nke a na-esote onye a kwụsịrị na 1987.
Arsene Wenger n'otu afọ (1987) nwere ọkwa ọzọ iji jikwaa AS Monaco. Mgbe ya na Monaco nọ na 1987 ruo 1994, ọ meriri Ligue 1 na iko French.
Olu Arsene na-eme ememe Cup Victory na Monaco
Arsene Wenger gosipụtara nnọọ iguzosi ike n'ihe nye Monaco site n'ịkwụsị ọrụ nke ijikwa Team France. N'ụzọ dị mwute, otu ụlọ ahụ na-emechu ya ihu. A kpochapụrụ ya afọ na-esote (1994).
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Ọrụ nlekọta na Japan.
Na Jenụwarị 1995, na-esote Monaco, ọ na-esote Monaco, ya na Nagoya Grampus asatọ. Ọ ka họpụtara ezigbo enyi ya bụ Boro Primorac, onye nwe ọrụ Valenciennes nke mbụ ịghọ onye inyeaka maka oge nke abụọ.
Arsene Wenger: Na-eme ememme Emperor's Cup na 1995
Ọrụ ike Arsene Wenger na Japan mere ka ndị otu ya merie iko Emperor nke Japan na 1995.
Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ hụrụ mmasị nri ndị Japan. A maara ya na ọ bụ naanị osikapa, akwụkwọ nri na azụ na-enweghị shuga na mmanụ. N'ajụjụ ọnụ a na-adịbeghị anya banyere àgwà oriri ya na Japan, Wenger zara ya "Ọ bụ ya mere na ị gaghị ahụ ndị mara abụ n'ebe ahụ."
Onye edemede Arsene Wenger dere 'Mmụọ nke mmeri'
Mgbe ọ na-abụ onye nchịkwa nke Nagoya Grampus Eight nke Japan, Arsène Wenger dere akwụkwọ nke akpọrọ 'Mmụọ nke Imebi Ihe ' na 1997. Edere akwụkwọ a nanị iji sọpụrụ football Japan. N'ime ya, Wenger kere òkè na nkà ihe ọmụma na nkà na ụzụ. Ọ nyere ọtụtụ ihe ọmụma banyere echiche ya na football ndị Japan.
N'ịgbaso echiche ya na ụkpụrụ ya n'akwụkwọ ya, Wenger nọgidere na-enweta Ngwá Ọrụ Njikọ Njikọ nke Japan. Onu ogugu a biara na ole na ole tupu o si na ndi agha siri ike.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Nzukọ nke Arsenal
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ihe ndị o mere tupu ya abanye na Arsenal adịghị ama ọbụna taa maka ụfọdụ ndị football football. Nke a bụ ya mere anyị ji ewepụta oge anyị iji mepụta isiokwu a.
Oge ya na Arsenal bịara n'oge okpomọkụ nke 1996 mgbe ụlọ ọrụ kụrụ Bruce Rioch aka. Ha họpụtara onye ọ kpọrọ 'onye France na-amaghị ama.'
Arsenal Nhọkọta dị ka Arsenal Nchịkwa
Oge oru Arsene Wenger kpatara esemokwu n'etiti ndi na akwado ya. Nke mbụ, o juru onye ọ bụla anya ịhụ aha mbụ ya nke yiri ụdị aha ụlọ ọrụ ha. N'ikwu nke a, o juru ndị Fans anya na ihe mere Wenger ji họrọ akụkọ Johann Cruyff banyere akụkọ ahụ. Otú ọ dị, ihe ka na-eguzosie ike ka ọ bụrụ na ọ kwadoro onye njikwa nke Njikọ nke Bekee.
Onye isi oche nke Arsenal, David Dein.
Akụkọ na-egosi na Arsene Wenger nwetara ọrụ Arsenal na-ekele ya nrọ abalị nke etiti abalị site n'aka onye isi oche nke Arsenal bụ David Dein.
David Dein kwuru na ọ rọrọ nrọ ma hụ ọhụụ e dere na mbara igwe nke kwuru 'Arsene maka Arsenal!'. N'okwu ya ....'Mgbe m teta, okwu mbụ m kwuru bụ ... Ọ bụ ihe kpatara ya, ọ bụ ihe kpatara na Arsene maka Arsenal ga-eme. '
Ọ na-esiri Wenger ike iji mba ahụ, ụlọ ọrụ na ndị na-agbapụ ọkụ mgbe ọ nwụsịrị. Enye ama enen̄ede ọsọn̄ọ ada ke ini enye okodude ke usen ini. Ọtụtụ akụkọ gosiri na ọ dara ọrịa mgbe izu ole na ole gasịrị. Na akụkọ na-adịbeghị anya, Wenger kwubiri ozugbo na okwu ndị a ... .. 'Mgbe m malitere ịkụzi Arsenal, m na-eche mgbe ụfọdụ na agaghị m adị ndụ. Mma, m na-arịa ọrịa. ' Ịhapụ m na ụlọ mbụ m - Nancy-Lorraine - ma eleghị anya, enyereghị aka '.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma - Mgbanwe na Arsenal Diet.
Arsene Wenger ịbịaru na Arsenal ghọrọ ihe gbanwere na àgwà oriri nke ụlọ. O mere iwu siri ike banyere nri ndị oriri. Ọ machibidoro ọtụtụ ngwunye ma gosi ụdị nke ya. Ọ ka mma bụ ihe ndị egwuregwu ahụ riri na ihe mgbakwunye ha weere. E wezụga Creatine, o nyere iwu ka onye ọbụla ọ bụla nwee ike iwepụta Multi-vitamin, caffeine boosters na protein.
The Arsenal Diet nke Arsene Wenger kwuru
N'ala mmalite nke nineties n'okpuru George Graham, ndị egwuregwu na-eri nri ma na ibe ibe ha na Friday Friday tupu egwuregwu ma ọ dịghị onye ọbụna nụ banyere creatine tupu.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Prọfesọ.
Ọ na-asụ asụsụ isii - French, German, English, Spanish, Italian and some Japanese. Ihe juru ọtụtụ ndị anya bụ na ọ pụghị ikwu okwu French ruo mgbe ọ dị afọ asaa. Ọ bịara England mgbe ọ dị afọ 29 iji mụọ English na Mahadum Cambridge. Ikike ya ikwu okwu n'asụsụ ndị a na-ezo aka n'ihe kpatara eji zoo ya as 'Professor'.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Ọ dịghị mgbe ọ na-aṅụ mmanya mgbe ọkụ.
Ọ bụ ezie na Sir Alex Ferguson dị ka ọmarịcha ama maka ememe mmanya mmanya ya na-eme n'azụ, Wenger abụghị n'ezie. Ọ dịghị asọpụrụ ndị ọrụ ibe ya maka òkù maka ịṅụ mmanya. Alex Ferguson ekwuola ozugbo, sị: "Eneene anaghị abịa mgbe ọ bụla mụ na ya rutere". Ọ bụ naanị njikwa na Premiership ka ị ghara ime otú ahụ.
Onye na-enweghi onye ọ bụla na-aṅụ mmanya ma ọ bụrụ na ọ nwụọ
Ụdị a na-adịghị aṅụ mmanya na-eme ka ihe kpatara ndị mmadụ ji hụ ya n'anya.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Ọ na-ese sịga mgbe ọ nọ na Monaco.
Arsene Wenger ekpughewo otú o si na-aṅụ sịga na dugout dị ka onye na-eto eto. Dị ka onye na-atụ ụjọ site na okike, ise siga nyere ya aka ịlụ ọgụ ma mee ka ọ daa mbà.
Arsene Wenger ekwuola na nke aka ya: 'M na-aṅụ sịga na dugout dị ka njikwa. Azụ m na-ese siga site na ọrụ oge m dị ka onye na-ere sịga mgbe m bụ nwata '.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Asteroid aha ya
33179 bụ onye a na-akpọ Arsenenewenger aha ya bụ Wenger
'33179 Nhazi' bụ onye na-agụ kpakpando aha ya bụ onye njikwa nke Arsenal site n'aka onye na-enyocha mbara igwe nke bụkwa onye na-akwado ofufe Arsenal. '33179 bu onye ozo' bu onye kpakpando nke aha ya bu mgbe onye isi ochichi. A chọpụtara kpakpando ahụ na March 29, 1998 site na Ian P. Griffin, onye na-akwado ọnwụ Arsenal.
Ian P. Griffin (b. 1966) bụ onye Britain onye na-enyocha mbara igwe, onye nchọpụta obere mbara ala na ọnụ na-ekwuru ọha na eze banyere ihe sayensị.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Ndụ mmekọrịta.
Wenger lụrụ di n'egwuregwu basketball mbụ bụ Annie Brosterhous, bụ onye lụrụ di na nwunye Fernando George nke kpakpando French nke ya na ya nwere ụmụ abụọ tupu ya enwee mmekọrịta ogologo oge na Wenger.
Ndị njem ahụ nọ na-enwe mmekọrịta dị ogologo oge kemgbe afọ nke 1990s, ma lụọ di na nwunye na 2010 tupu ha agbaa na 2015.
Ndụ mmekọrịta nke Arsene Wenger
Ekwuru na onye isi Gunners na ogologo oge hụrụ n'anya Annie, 59, kwenyero na ngwugwu ego ma kee akụ ha. E tinyere akwụkwọ n'ụlọikpe n'obodo nna ya nke Strasbourg, France.
O kwuru na mbụ na ọrụ ya dị elu na ụlọ ọrụ London nwere nrụgide ma mee ka njedebe nke mmekọrịta ya. Wenger kwetara na ka ọ na-abanye na Arsenal, o kwere nwunye ya nkwa na ya ga-ala ezumike nká n'ime afọ ise. Wenger na onye ya na Annie nwere ogologo oge nwere mkpebi 'nkewa' nke ọkàikpe na Paris nyere, nke pụtara na ha nweere onwe ha ịhụ ndị ọzọ.
Ha abụọ nwere nwa nwanyị aha ya bụ Lea Wenger. Dika nwatakiri, Arsene Wenger nwere obi uto ya dika enwere ya uzo mgbe o na eme ihe ndi ozo.
Arsene Wenger na nwa nwa nwayi Lea Wenger
Ọ na-eso nna ya mgbe nile gaa nzukọ na tupu nyochaa egwuregwu. Na-anọ n'akụkụ ebe nna na-arụ ọrụ ahụ. Ma Wenger na nwunye ya na nwunye ya nwere ntachi obi ruo mgbe Lea bụ 18 tupu ndị abụọ ahụ amalite imebi ha.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Na-ejide BSc na ego.
Ọ na-ejide BSc na ego
N'ezie, Wenger bụ ihe nke ụbụrụ ụbụrụ. Na 1971, o debanyere aha na Ngalaba Nkà na Ụba na Nchịkwa Sciences na Mahadum Strasbourg iji gụọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụ na ụba mgbe obere oge na nkà mmụta ọgwụ. Na 1973, o sonyeere Mulhouse ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-eme ka ọ bụrụ ọrụ ya. Wenger mechara nweta akara ugo mmụta akụ na ụba n'afọ ọzọ.
N'ezie, onyeisi ndị French mesịrị gaa nweta akara ugo mmụta nke Masters na Economics na Mahadum Strasbourg.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Onye na-akpọ Arsene Wenger Vs Mourinho (Dị ka ihe atụ na ọgụ).
Ihe yiri ya: Wenger, dị ka onye obi ọjọọ ya bụ Jose Mourinho, na-asụ asụsụ isii dị iche iche - French, German, English, Spanish, Italian and spittering of Japanese.
Otú ọ dị, José Mourinho kwenyere na ọ na-emeri ihe ịga nke ọma ya mgbe o nyesịrị nyocha ọbịbịa ya n'oge na-adịbeghị anya site n'ikwu na enweghi nkwanye ùgwù o kwesiri ma obu mesoo ya dika nkwenye dika Arsene Wenger.
Onye na-akpọ Arsene Wenger Vs Mourinho (Dị ka ihe atụ na ọgụ).
Agha nke okwu n'etiti Jose Mourinho na Arsene Wenger abụghị ihe ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na Josị Mourinho enweela aka na njedebe kemgbe ọtụtụ afọ, ndị oru abụọ ahụ enweela okwu ọnụ maka ibe ha.
Mourinho Vs Wenger (Nkebi 1):
"Ahụghị m nke ọma na Chelsea na-egwuri egwu karịa ndị England karịa anyị. Ole ndị ka ha mepụtara, na-emepụta ihe? Nanị otu, John Terry. " - Wenger na 2005 mgbe a na-enyocha ya na ntanetị nke Arsenal.
Ná mmalite nke oge na-esote n'oge August 2005, Wenger kwukwara nchegbu banyere usoro aghụghọ nke Chelsea: "Amaara m na anyị na-ebi n'ime ụwa ebe anyị nwere nanị ndị mmeri na ndị na-efu, ma ozugbo egwuregwu na-agba ndị na-ajụ ịmalite ime egwuregwu, egwuregwu ahụ nọ n'ihe ize ndụ. "
Mourinho enweghị mmerụ. "Wenger nwere ezigbo nsogbu na anyị ma echere m na ọ bụ ihe ị na-akpọ na England a voyeur. Ọ bụ onye nwere mmasị ile ndị ọzọ anya. E nwere ụfọdụ ụmụ okorobịa, mgbe ha nọ n'ụlọ, nwere nnukwu teliskop ịhụ ihe na-eme n'ezinụlọ ndị ọzọ. Wenger aghaghị ịbụ otu n'ime ha - ọ bụ ọrịa. Ọ na-ekwu, na-ekwu, na-ekwu maka Chelsea. "
Onye ọrụ Wenger zara ya. "O nweghị ihe ọ ga-eme, ya na eziokwu na enweghị nkwanye ùgwù. Mgbe ị na-eme ka ndị nzuzu nwee ihe ịga nke ọma, ọ na-eme ka ha bụrụ ndị nzuzu mgbe ụfọdụ ma ha enweghị ọgụgụ isi. "
Mourinho Vs Wenger (Nkebi 2): Nke a mere mgbe Mourinho na-elekọta Real Madrid na Xabi Alonso na Sergio Ramos nwetara akwụkwọ maka ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ megide Galatasaray ka ha nwee ike ịkwado ụda maka ụkwụ abụọ dị mma karịa ihe ize ndụ ndị na-efu na egwuregwu mgbe e mesịrị n'egwuregwu ahụ, Wenger nwere ọtụtụ ikwu
Wenger kwuru; "Mgbe ị na-ahụ otú o si ele telivishọn, ọ bụ ngosipụta kachasị mma iji chee echiche: 'Ka emela ya ọzọ'. Ọ na-ese, n'ụzọ doro anya, jọgburu onwe ya. Ọ bụ ihe nwute ịhụ nke si n'otu nnukwu ụlọ. "
Ọzọkwa, ọ ga-eme nke ọma ịza nzaghachi ọkụ site na Mourinho ... "Kama ikwu banyere Real Madrid, Mr Wenger kwesịrị ikwu banyere Arsenal ma kọwaa otú 2-0 si kwụsị otu ìgwè na Champions League maka oge mbụ. Akụkọ banyere ụmụaka na-eme agadi ugbu a. Sagna, Clichy, Walcott, Fabregas, Song, Nasri, Van Persie, Arshavin abụghị ụmụaka. Ha niile bụ egwuregwu kachasị mma. "
Arsene Wenger Vs Mourinho (Agha).
Mourinho na Wenger (Onye na-egbu egbu)
Na February 2014, nanị izu ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, a jụrụ Wenger ihe mere ụfọdụ ndị na-atụle ndị na-eche na Arsenal ji bụrụ ndị nwere olileanya na ha ga-eme ka ọchịchọ ha kwụsị. "Ọ bụ egwu ịkụda," o kwuru.
Mourinho wepụtara otu okwu na-echefu echefu na nzaghachi. "M na-atụ egwu nke ọdịda? Ọ bụ ọkachamara na ọdịda. Achọghị m. Ya mere, ọ bụrụ na mmadụ echee na ọ bụ onye ziri ezi ma m na-atụ egwu ọdịda, ọ bụ n'ihi na anaghị m ada ọtụtụ ugboro. Ya mere, ma eleghị anya ọ bụ onye ziri ezi. Adịghị m eji emezighị emezi. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ọkachamara n'ihi na, afọ asatọ na-enweghị otu ọlaọcha, nke ahụ adịghị. "
Mgbe afọ iri nke okwu mkparị, mmeri ahụ mechara na-arịwanye elu na October 2014 mgbe Wenger gbapụrụ Mourinho n'oge arụmụka na mkpịsị aka na Stamford Bridge.
"N'ikwu okwu, echere m na agaghị m emeghachi omume," Wenger kwuru. "Ọ bụghị ụzọ a ga - esi na - eme egwuregwu football. Mourinho ò kpasuru m iwe? Nke ahụ bụ mmetụta m. Adịghị m ịbanye na teknụzụ Chelsea. "
Ma mgbe a tụrụ aro na Mourinho na a ga - ebo ebubo ya na ndị agha Arsenal ... "Ejiri? Ọ bụrụ na ọ bụ m, ọ ga-abụrịrị ebe iwu egwuregwu na-egbochi. "
Wenger weghaara ohere iji mee ka Mourinho maa jijiji mgbe emesịrị mee ka onye iro ya dị na Shield Community Shield na August 2015 - mana ọ bụ ndị Portuguese na-enye ndị ọha na eze ọha na eze ọzọ.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Arsene Wenger Vs Alex Ferguson (ihe dị iche na ọgụ).
Mkparịta ụka nke Wenger na onye ọrụ Manchester United bụ Alex Ferguson bụ akụkọ ntụrụndụ, ma ọ na-eme ka ọ bụrụ nke na-ekwu na Wenger kwuru na Pizza na Sir Alex na-esote ọkwá. "Pizzagate" mere na Old Trafford na October 2004, ebe United kwụsịrị ọsọ 49 nke egwuregwu Arsenal.
Na igwefoto, mgbe egwuregwu gasịrị, Wenger kpọrọ Ruud van Nistelrooy a "Ịghọ aghụghọ ule", na 2007 Carling Cup ikpeazụ a "Onye ụgha" ndị ahụ nọ na igwefoto. Onye na-ahụ nlezianya na nke na-ahụ anya ekwupụtawo na ya nwere akụkụ gbara ọchịchịrị.
Arsene Wenger, Oge kachasị mma & Iwe oge.
Akpọrọ ya na £ 15,000 site na Football Association na akụkọ ihe omuma ya Sir Alex kwetara na "Pizzagate" nwere "Kpata ụbụrụ nke Arsene" ma mee ka mmekọrịta ha daa ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise.
"Ọ na-ewe iwe"- dika Sir Alex Ferguson chetara nke ọma mgbe ọ na-agwa ya n'akụkụ akụkọ akụkọ Pizzagate a ma ama. "Ruud van Nistelrooy batara n'ime ụlọ mgbakwasa ma kwuo na Wenger nọ na-enye ya mkpịsị aka ka ọ na-ahapụ ọkwa ahụ. Ozugbo ahụ, agara m ịsị Arsene: 'Ịhapụ nanị ndị egwuregwu m.' Ọ na-ewe oké iwe mgbe egwuregwu ahụ funahụrụ ya. Nke ahụ bụ ihe kpatara arụmụka ya. 'I kwesiri ịga na egwuregwu gi', agwara m ya. Ọ bụ onye doro anya. Ejiri aka ya mee ka m maa jijiji. Ma m na-achịkwa, amaara m ya. '
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Jikwaa Arsenal na-akpaghị aka Njikọ Season.
Ihe dị egwu banyere Wenger bụ na ọ jisiri ike na-agba Arsenal ọsọ na oge egwuregwu.
Preston North End 115 gara aga site na Preston North End 42 afọ gara aga! Ụlọ ọrụ ahụ mebiri akụkọ ọbụla Nottingham Forest nke 2004 na-ekwekọghị na ya ma merie egwuregwu asaa ọzọ tupu ọ laa na October 49. Lee ihe egwuregwu XNUMX na-enweghị atụ! Nke a na-egosi ike ha kachasị.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Ememme 20 a na-eme ememme a na-eme ememme.
Mgbe iri afọ abụọ gasịrị na Arsenal, 15 trophies, ámá egwuregwu ọhụrụ na ihe karịrị £ 700m na-eji na-egwu egwuregwu, Arsene Wenger mara na ọ bụ onye ọrụ kachasị anya na onye nlekọta nke ndị isi mba na-aga nke ọma.
Ma olee ihe ga-abụ onye njem Wenger? Nye ụfọdụ, ọ bụ ọrụ maka ịgbanwe egwuregwu Bekee. N'ebe ndị ọzọ nọ, ọganihu mbụ ọ kwụsịrị wee kpee ya ikpe na njedebe nke 12 afọ n'enweghi aha aha.
Akụkọ akụkọ Gunners Thierry Henry gwara Arsene Wenger banyere ihe ndị dị elu na nkwụsị n'oge 20 afọ na-elekọta Arsenal.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Ọ kpọpụtara George Weah na European Football.
Ekwuola ọtụtụ ihe banyere otú Wenger si mee ka Thierry Henry ghara ileghara Arsenal anya site na Juventus ma mee ya onye ọkpụkpọ dị egwu dị ka anyị maara ugbu a. Mana ole na ole maara na n'ime 1988, ọ bịanyela aka na onye na-amaghị ihe na Liberia, na-eweta Weah na Monaco, bụ onye ga-anọgide bụrụ FIFA World Player nke Year na 1995.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Nsogbu nke Mgbu.
PAin abụrụ akụkụ dị mkpa nke ndụ nye ma Arsenal Fans na Arsene Wenger. Onye ọ bụla maara na Arsene Wenger adịtụbeghị ebuli Njikọ Njikọ, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịtụle ọnụ ọgụgụ nkwụsị ya na ndị dum Fans Fans nwere na ya, Njikọ Njikọ ahapụkwala ha.
Ọhụụ nke Arsenal Fans
Ndị Gunners abatala na njedebe n'okpuru Wenger, ugboro abụọ na 2007 na Birmingham na 2011.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma -Nnukwu Nwa nke Bob Marley.
Wenger bụ Bob Marley.
Arsene Wenger, Nnukwu Nwa nke Bob Marley.
N'echiche ya banyere Bob Marley, Wenger kwuru otu oge; 'Ee, enwere m egwu ya na nwoke ọ bụ,' ka o kwuru. 'E meghị ya'. Ọ dị adị n'ezie. Enwere m ndị na-enweghị ụzọ mgbapụ na ndị na-apụta n'ihi talent ha.
Antubioh bụ Fonkem primus Mee 9, 2017 N'elekere anọ 10: 54 nke ehihie
dị mma na ịme egwuregwu. ma ọ bụrụ na ọ lara ezumike nká ugbu a, ọ gaghị akwa ụta ọ bụla .nyere ya amara Chineke
Bọchị agbanweela: Septemba 10, 2020
Bọchị agbanweela: Septemba 9, 2020
Bọchị agbanwee: August 27, 2020